Ota Ward ယဉ်ကျေးမှုဆိုင်ရာအနုပညာသတင်းအချက်အလက်စက္ကူ "ART bee HIVE" vol.6 + bee! | Ota Ward ယဉ်ကျေးမှုမြှင့်တင်ရေးအသင်း
ဆောင်းပါး၏ဆောင်းပါး - Eiichi Shibusawa သည်ပျားအကြောင်းအိပ်မက်မက်ခဲ့သည့် Denenchofu!
"Ota Ward ရိုးရာပြတိုက်မှူး Mr. Takahisa Tsukiji"
Denenchofu သည်ဂျပန်ရှိအဆင့်မြင့်လူနေအိမ်နေရာများနှင့်ထပ်တူထပ်မျှဖြစ်သော်လည်း၎င်းသည် Uenumabe နှင့် Shimonumabe ဟုခေါ်သည့်ကျေးလက်ဒေသဖြစ်သည်။ထိုသို့သောareaရိယာသည်လူတစ် ဦး ၏အိပ်မက်ကြောင့်ဖြစ်သည်။ထိုသူ၏အမည်မှာ Eiichi Shibusawa ဖြစ်သည်။ဒီတစ်ခါမှာတော့ Oen Ward Folk Museum ကိုမှူးဖြစ်သူ Mr. Takahisa Tsukiji ကို Denenchofu မွေးဖွားခြင်းအကြောင်းမေးခဲ့တယ်။
အရင်က Denenchofu ကဘယ်လိုနေရာမျိုးလဲ။
"အဲဒိုခေတ်ကရွာတွေဟာလူ့အဖွဲ့အစည်းရဲ့အခြေခံအုတ်မြစ်ပဲ။ Uenumabe ကျေးရွာနှင့် Shimonumabe ကျေးရွာများသည် Denenchofu အကွာအဝေးဖြစ်သည်။ Denenchofu 1-chome, 2-chome နှင့်လက်ရှိ Shimonumabe ဓါတ်ရောင်ခြည်သည် 3-chome တွင်တည်ရှိသည်။ Meiji ခေတ်အစတွင်လူ ဦး ရေမှာ ၈၈၂ ဖြစ်သည်။ အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်မှာ ၁၆၄ ယောက်ဖြစ်သည်။ စကားမစပ်ဂျုံနှင့်အထွေထွေသီးနှံများထုတ်လုပ်ခြင်းနှင့်ဆန်သည်နိမ့်သောနေရာများတွင်ထုတ်လုပ်သော်လည်း၊ ဒီfieldsရိယာမှာစပါးစိုက်ကအနည်းငယ်သာရှိတယ်၊
ဖွံ့ဖြိုးမှုမတိုင်မီက Denenchofu မှထောက်ပံ့သည် - Tokyu ကော်ပိုရေးရှင်း
"ငါသည်ဂျပန်အရင်းရှင်စနစ်၏ဖခင် Eiichi Shibusawa * ဖြစ်သည်။ Taisho ခေတ်အစတွင်ဂျပန်နိုင်ငံ၏ပထမဆုံးဥယျာဉ်မြို့တော်ကိုကောင်းမွန်စွာတပ်ဆင်ထားသောလူနေမှုအခြေခံအဆောက်အအုံများနှင့်သဘာဝအတိုင်းပြည့်နှက်နေသည်။
Meiji ပြန်လည်ထူထောင်ရေးပြီးကတည်းကဂျပန်သည်ချမ်းသာသောစစ်သားများ၏မူဝါဒအောက်တွင်လျင်မြန်စွာစက်မှုထွန်းကားမှုကိုမြှင့်တင်လိမ့်မည်။Russo-Japanese စစ်ပွဲနှင့်ပထမကမ္ဘာစစ်ကြောင့်စက်ရုံများသည်ယခင်ကတိုကျိုမြို့ (ဥပမာအားဖြင့် Yamanote လိုင်းနှင့်ဆူမီဒါမြစ်တစ်ဝိုက်) တွင်တိုးတက်ခဲ့သည်။ထို့နောက်ထိုတွင်အလုပ်လုပ်သောလူ ဦး ရေသည်တဖြည်းဖြည်းတိုးများလာလိမ့်မည်။စက်ရုံများနှင့်အိမ်များကိုစုစည်းထားသည်။သဘာဝကျကျ, သန့်ရှင်းပတ်ဝန်းကျင်ဆိုးရွား။၎င်းသည်အလုပ်လုပ်ရန်ကောင်းကောင်းဖြစ်သော်လည်းအသက်ရှင်ရန်ခက်ခဲသည်။ "
Shibusawa သည်ဘဏ္andာရေးနှင့်စက်မှုလောကတွင်အဓိကကျသောသူဖြစ်သည်၊ သို့သော်သင်အဘယ်ကြောင့်မြို့ပြဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုတွင်ပါ ၀ င်ခဲ့သနည်း။
Shibusawa သည် Tokugawa shogunate အပြီးတွင်ပြည်ပသို့ထွက်ခွာသွားသည်။ သင်သည်နိုင်ငံခြားမြို့တစ်မြို့ကိုမြင်ဖူးပြီးဂျပန်နှင့်ကွဲပြားမှုကိုခံစားခဲ့ရလိမ့်မည်။
Shibusawa သည် ၁၉၁၆ တွင်အလုပ်မှအနားယူခဲ့သည် (Taisho 1916) ။ငါဥယျာဉ်မြို့ကြီးများ၏ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုတွင်ပါဝင်ရန်စတင်ခဲ့ပြီး, ထိုကာလနှင့်ထပ်တူမတိုင်မီတစ်နှစ်ဖြစ်ခဲ့သည်။တက်ကြွသောတာ ၀ န်မှအနားယူခြင်းကိုဆိုလိုသည်မှာသင်သည်စီးပွားရေးလောကသို့မဟုတ်စက်မှုလုပ်ငန်းတို့၏ခြေကုပ်များနှင့်ဆက်နွယ်ရန်မလိုတော့ပါ။စီးပွါးရေးအကျိုးသက်ရောက်မှုကိုသာ ဦး စားမပေးသောစံပြအမြတ်အစွန်းမယူသောမြို့တော်ကိုတည်ဆောက်ခြင်းသည်မှန်ကန်ကြောင်း၊ သို့မဟုတ်တက်ကြွသောတာ ၀ န်မှအနားယူခြင်းသည်အစပျိုးမှုတစ်ခုဖြစ်သည်ဟုဆိုထားသည်။ "
အဘယ်ကြောင့် Denenchofu ကိုဖွံ့ဖြိုးမှု site တစ်ခုအဖြစ်ရွေးချယ်ခဲ့သနည်း။
"၁၉၁၅ ခုနှစ်တွင် (Taisho 1915) တိုကျိုမြို့တော်ဝန်နှင့်တရားရေး ၀ န်ကြီးအဖြစ်တာ ၀ န်ထမ်းဆောင်ခဲ့သည့် Yukio Ozaki ၏အတွင်းရေးမှူးဖြစ်သူ Yaemon Hata သည်ဒေသခံစေတနာ့ဝန်ထမ်းများနှင့်အတူ Shibusawa သို့ သွားရောက်၍ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက်အသနားခံခဲ့သည်။ ယခင်ကဖြစ်ခဲ့သည်။ အချိန်ကြာမြင့်စွာကတည်းကဤပြproblemနာကိုသတိပြုမိသော Shibusawa တွင် switch ကိုဖွင့်သည်။ ထိုနှစ်တွင်ပင်ကျွန်ုပ်သည်အမေရိကန်သို့ဆန်ဖရန်စစ္စကိုကုန်စည်ပြပွဲသို့သွားရန်၊ ရေခြားမြေခြားမြို့စီမံကိန်းရေးဆွဲခြင်းသို့လည်ပတ်ကာကျေးလက်ဒေသမြို့တော်လိုအပ်သည်ကိုဆုံးဖြတ်ခဲ့သည်။ Rex City Co. , Ltd. ကို ၁၉၁၈ ခုနှစ်တွင်တည်ထောင်ခဲ့သည် (Taisho 4) ။ "
ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအစတွင် Denenchofu ဘူတာမှထောက်ပံ့ပေးသည် - Tokyu ကော်ပိုရေးရှင်း
"ဒါဟာလူနေအိမ်asရိယာတစ်ခုအနေနဲ့ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုပါ။ ကျေးလက်လူနေအိမ်areaရိယာတစ်ခုပါ။ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုသိပ်မရှိတဲ့ကျေးလက်ဒေသတစ်ခုပါ။ ဒါကြောင့်မင်းရဲ့အိပ်မက်တွေကိုလွတ်လပ်စွာအကောင်အထည်ဖော်နိုင်မှာပါ။
ပထမ ဦး စွာမြေယာမြင့်သည်။မရှုပ်မနေနဲ့လျှပ်စစ်ဓာတ်အား၊ သဘာဝဓာတ်ငွေ့နှင့်ရေတို့လည်းစီးဆင်းနေပြီလမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးကောင်းမွန်သည်။ထိုအချိန်တွင်အိမ်တစ်အိမ်ရောင်းသောအခါဤအချက်များသည်အချက်များဖြစ်သည်။ "
Eiichi Shibusawa ၏သား Hideo Shibusawa သည်အမှန်တကယ်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအတွက်အဓိကသော့ချက်ဖြစ်လိမ့်မည်။
"Eiichi Shibusawa ကုမ္ပဏီကိုစတင်တည်ထောင်ခဲ့ပြီးသူ့ကုမ္ပဏီကိုသူ့သား Hideo က ဦး ဆောင်သည်။
Eiichi သည်စီးပွားရေးလောကမှသူငယ်ချင်းများကိုကုမ္ပဏီတစ်ခုတည်ထောင်ရန်ဆွဲဆောင်သော်လည်း၊ ထိုသူအားလုံးသည်တစ်နေရာရာ၌သမ္မတများဖြစ်လာကြသည်၊ ထို့ကြောင့်၎င်းတို့သည်အချိန်ပြည့်လုပ်ငန်းတွင်မပါ ၀ င်ပါ။ဒီတော့ဥယျာဉ်မြို့တော်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးကိုအာရုံစိုက်ဖို့အတွက်၊ ငါ့သားဟီဒီယိုကိုထပ်ထည့်ခဲ့တယ်။ "
ဆန်ဖရန်စစ္စကိုဆင်ခြေဖုံးရှိကျေးလက်မြို့တော်စိန့်ဖရန်စစ်ဝုဒ်နှင့်ကျွန်ုပ်တွေ့ဆုံခဲ့သည်။ Denenchofu သည်ဤမြို့၏နောက်တွင်ပုံစံပြုသည်။ မြို့၏အဝင်ဝတွင်ဂိတ်တစ်ခုသို့မဟုတ်အထိမ်းအမှတ်အဆောက်အ ဦး တစ်ခုဖြစ်သည်။ ဘူတာရုံအဆောက်အအုံရှိသည်။ ပြင်သစ်နိုင်ငံရှိပါရီမြို့ကိုလည်းသတိပြုမိပြီးဘူတာရုံအဆောက်အအုံသည်အောင်ပွဲခံအပြန်အလှန်တံခါးပေါက်အဖြစ်ဆောင်ရွက်သည်ဟုဆိုသည်။ လက်ရှိစမ်းရေတွင်းသည်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအစကတည်းကဖြစ်သည်။ ။
အနောက်တိုင်းပုံစံဗိသုကာကိုလည်းနိုင်ငံခြားမြို့ပြရှုထောင့်နှင့်အတူတည်ဆောက်ခဲ့သည်။ဒါပေမယ့်အပြင်ပန်းကအနောက်တိုင်းပုံစံဆိုရင်တောင်သင်အတွင်းထဲဝင်တဲ့အခါမှာဂျပန် - အနောက်တိုင်းစတိုင်တွေဖြစ်တဲ့ tatami ဖျာလိုမျိုးအနောက်အနောက်ပုံစံရေးဆွဲတဲ့အချိန်အတွင်းစပါးကိုစားလေ့ရှိတယ်။လုံးဝအနောက်တိုင်းစတိုင်များမရှိကြပေ။ဒါကဂျပန်လူနေမှုပုံစံမျိုးတော့မဟုတ်ပါဘူး။ "
"အဓိကလမ်းအကျယ်က ၁၃ မီတာ။ အခုအံ့သြစရာတော့မဟုတ်ဘူးလို့ကျွန်တော်မထင်ဘူး။ ဒါပေမယ့်အဲဒီအချိန်တုန်းကအတော်လေးကျယ်ပြန့်တယ်။ လမ်းဘေးသစ်ပင်တွေကခေတ်ပြိုင်ဖြစ်အောင်လုပ်နေတယ်။ သစ်ပင်တွေကိုအရောင်တောက်တောက်နဲ့သုံးချုံလုံးတောက်ပနေပုံရတယ်" လမ်း၊ စိမ်းလန်းသောandရိယာများနှင့်ပန်းခြံများ၏အချိုးမှာလူနေအိမ်ရာနေရာ၏ ၁၈% ဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်မြင့်မားသည်။ ထိုအချိန်တွင်တိုကျိုအလယ်ပိုင်းတွင်ပင် ၁၀ ခန့်ရှိသည်။ "
"ဒါကမှန်တယ်လို့ကျွန်တော်ထင်တယ်။ သိပ်မကြာခင်မှာပဲ Ota Ward ကိုယ်တိုင်ရေဆိုးစနစ်ကိုကောင်းကောင်းထိန်းသိမ်းနိုင်ခဲ့တယ်။ အရင်တုန်းကဆိုရင်အိမ်စွန့်ပစ်ရေကို Rokugo ရေလမ်းကြောင်းဟောင်းရေလမ်းကြောင်းထဲစီးဝင်သွားတယ်။ ဒါလို့ခေါ်တဲ့မိလ္လာကွန်ယက်ကိုဖန်တီးခဲ့တာပါ။ နောက်ပိုင်း ၁၉၅၅ ခုနှစ်လို့ထင်တယ်။
"Horai Park နှင့် Denen Tennis Club (နောက်ပိုင်း Denen Coliseum) ။ Horai Park သည်မူလကပန်းခြံပုံစံကျေးလက်ဒေသဖြစ်သောဥယျာဉ်မှထွက်ခွာသွားသည်။ ထိုကဲ့သို့သောသစ်တောများသည် Denenchofu inရိယာတစ်ခုလုံးတွင်ရှိသော်လည်းမြို့ပြဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု ကျေးလက်မြို့တစ်မြို့လို့ခေါ်ကြတဲ့မူရှာရှီနိုရဲ့မူလအကြွင်းအကျန်တွေပျောက်ကွယ်သွားတာပေါ့။ ဒါကြောင့် Denen Coliseum ဟာဘေ့စ်ဘောကွင်းကို Denen တင်းနစ်ကလပ်ရဲ့အဓိကအားကစားကွင်းအဖြစ်ပြန်ဖွင့်လိုက်တယ်။ "
Tamagawadai လူနေအိမ်ရိယာ၏အပေါ်ယံမြင်ကွင်း - Ota Ward Folk Museum
"၁၉၂၃ ခုနှစ်တွင် (Taisho 1923) တွင် Great Kanto ငလျင်လှုပ်ခတ်ခဲ့ပြီးမြို့အလယ်ဗဟိုပျက်စီးခဲ့သည်။အိမ်များပြည့်နေပြီးမီးပြန့်သွားပြီးအကြီးအကျယ်ပျက်စီးသွားသည်။အမှိုက်သရိုက်များပြည့်နေသောအိမ်များသည်အန္တရာယ်များသောကြောင့်မြင့်မားသောနေရာများတွင်မြေသည်တည်ငြိမ်ပြီးကျယ်ဝန်းသည့်ဆင်ခြေဖုံးတွင်နေထိုင်ရန်အရှိန်အဟုန်မြင့်တက်လာသည်။၎င်းသည်လေမုန်တိုင်းတစ်ခုဖြစ်ပြီး Denenchofu သည်နေထိုင်သူများကိုတပြိုင်နက်တိုးပွားစေလိမ့်မည်။ထိုနှစ်၌ပင် Chofu ဘူတာရုံဖွင့်လှစ်ခဲ့ပြီး ၁၉၂၆ ခုနှစ်တွင် (Taisho 12) ကို Denenchofu ဘူတာကိုအမည်ပြောင်းခဲ့ပြီး Denenchofu အမည်နှင့်အဖြစ်မှန်နှစ်ခုလုံးတွင်မွေးဖွားခဲ့သည်။ "
ပြတိုက်တွင်သူသည်ယေဘုယျအားဖြင့်သမိုင်းဆိုင်ရာပစ္စည်းများနှင့်သက်ဆိုင်သောသုတေသန၊ သုတေသနနှင့်ပြပွဲစီမံကိန်းများအတွက်တာ ၀ န်ရှိသည်။ ဒေသ၏သမိုင်းကြောင်းကိုဒေသခံအသိုင်းအ ၀ ိုင်းသို့နေ့စဉ်သိရှိစေရန်ရုန်းကန်နေရသည်။ NHK ၏လူကြိုက်များသော "Bura Tamori" အစီအစဉ်တွင်ပေါ်ထွက်လာခဲ့သည်။
Eiichi Shibusawa မှ "Aobuchi Memoir" မှကောက်နုတ်ချက်
"မြို့ပြဘဝမှာသဘာဝသဘာ ၀ မပါပါဘူး။ ဒါ့အပြင်မြို့ကြီးတွေတိုးချဲ့လေ၊ လူ့ဘ ၀ မှာသဘာဝသဘာ ၀ များများနည်းလာလေလေဖြစ်တယ်။ ရလဒ်အနေဖြင့်၎င်းသည်ကိုယ်ကျင့်တရားကိုထိခိုက်စေရုံသာမကရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာထိခိုက်မှုလည်းဖြစ်စေသည်။ ကျန်းမာရေးအတွက်၊ လှုပ်ရှားမှုအားနည်းခြင်း၊ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာကျုံ့ကျုံ့ခြင်းနှင့်မှတ်ဥာဏ်အားနည်းခြင်းနှင့်အတူလူနာအရေအတွက်တိုးပွားစေသည်။
လူသားများသည်သဘာဝမပါဘဲမနေထိုင်နိုင်ပါ။ (ချန်လှပ်ထားခြင်း) ထို့ကြောင့် "City City" သည်ဗြိတိန်နှင့်အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုတို့တွင်နှစ်ပေါင်း ၂၀ ကျော်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်လာခဲ့သည်။ရိုးရိုးလေးပြောရမယ်ဆိုရင်ဒီဥယျာဉ်မြို့တော်ဟာသဘာဝတရားနဲ့ပေါင်းစပ်ထားတဲ့မြို့တစ်မြို့ဖြစ်ပြီးကျေးလက်ဒေသနဲ့မြို့ပြအကြားအပေးအယူလုပ်ဟန်ရှိတဲ့ကြွယ်ဝတဲ့ကျေးလက်အရသာရှိတဲ့မြို့တစ်မြို့ပါ။
③③ရိယာသည်အနည်းဆုံးဆူနာမီ ၁၀၀၀၀၀ (စတုရန်းမီတာ ၃၃၀,၀၀၀ ခန့်) ရှိသင့်သည်။
etc. စသည်တို့ကိုကြေးနန်း၊ တယ်လီဖုန်း၊ မီးအိမ်၊
hosp ဆေးရုံများ၊ ကျောင်းများနှင့်ကလပ်များကဲ့သို့သောအဆောက်အ ဦ များရှိသည်။
Hideo Shibusawa ၏အခြေခံအစီအစဉ်
လမ်းအကျယ် (လမ်းအကျယ် ၁၃ မီတာ၊ အနည်းဆုံး ၄ မီတာ)
၁၈% သောလမ်းများ၊ စိမ်းလန်းသောနေရာများနှင့်ပန်းခြံများ
(၂) အတားအဆီးတစ်ခုပြုလုပ်ရန်လိုလျှင်၎င်းသည်ကြော့။ ကြော့ရှင်းရပါမည်။
③အဆောက်အ ဦး သည်တတိယထပ်တွင်သို့မဟုတ်အောက်တွင်ရှိရမည်။
④ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းသည်လူနေအိမ်ရာနေရာ၏ ၅၀% အတွင်းတွင်ရှိရမည်။
building ဆောက်လုပ်ရေးလိုင်းနှင့်လမ်းကြားရှိအကွာအဝေးသည်လမ်းအကျယ်၏ ၁/၂ ဖြစ်ရမည်။
the အိမ်၏အများပြည်သူအသုံးစရိတ်သည် tsubo လျှင်ယန်း ၁၂၀ သို့မဟုတ်ထိုထက်ပိုရမည်။
park ပန်းခြံများ၊ အပန်းဖြေဥယျာဉ်များနှင့်ကလပ်များတည်ထောင်ခြင်း။
Eiichi Shibusawa မှပေးအပ်သည်။ အမျိုးသားအစားအသောက်စာကြည့်တိုက်ဝက်ဘ်ဆိုက်မှပြန်လည်ထုတ်ဝေသည်
၁၈၄၀ တွင်မွေးဖွားခဲ့သည် (Tenpo 1840) ကို Saitama စီရင်စု၊ Fukaya City, Chiaraijima ရှိလက်ရှိလယ်ယာမြေအိမ်တွင်မွေးဖွားခဲ့သည်။ထို့နောက်သူသည် Hitotsubashi မိသားစု၏လက်အောက်ခံဖြစ်လာပြီးပါရီကုန်စည်ပြပွဲသို့မစ်ရှင်အဖွဲ့ဝင်အဖြစ်ဥရောပသို့သွားခဲ့သည်။ဂျပန်သို့ပြန်ရောက်ပြီးနောက်သူသည် Meiji အစိုးရကိုတာဝန်ထမ်းဆောင်ရန်တောင်းဆိုခံခဲ့ရသည်။ ၁၈၇၃ တွင် (Meiji 11) သည်အစိုးရမှနုတ်ထွက်ပြီးစီးပွားရေးလောကသို့ပြောင်းလဲခဲ့သည်။Daiichi အမျိုးသားဘဏ်၊ တိုကျိုစတော့အိတ်ချိန်းနှင့်တိုကျိုသဘာဝဓာတ်ငွေ့စသည့်ကုမ္ပဏီ ၅၀၀ ကျော်နှင့်စီးပွားရေးအဖွဲ့အစည်းများတည်ထောင်ခြင်းနှင့်စီမံခန့်ခွဲခြင်းတွင်ပါ ၀ င်ခဲ့ပြီးလူမှုရေးစီမံကိန်း ၆၀၀ ကျော်တွင်ပါ ၀ င်ခဲ့သည်။ "ကိုယ်ကျင့်တရားစီးပွားရေးစည်းလုံးမှုသီအိုရီ" ကိုထောက်ခံသည်။အဓိကအလုပ် "သီအိုရီနှင့်ဂဏန်းသင်္ချာ" ။
"ဗိသုကာ Kengo Kuma"
Kengo Kuma သည်အမျိုးသားအားကစားကွင်း၊ JR Takanawa Gateway station, United States ရှိ Dallas Rolex မျှော်စင်၊ စကော့တလန်ရှိ Victoria နှင့် Albert Museum Dundee Annex နှင့် Odung Pazar စသည့်မြောက်မြားစွာသောဗိသုကာဒီဇိုင်းတွင်ပါ ၀ င်သောဗိသုကာပညာရှင် Kengo Kuma တူရကီအတွက်ခေတ်သစ်အနုပညာပြတိုက်။အသစ်ဒီဇိုင်းပြုလုပ်ထားသော Mr.Kuma သည် Denenchofu Seseragi ဥယျာဉ်တွင်ဖွင့်လှစ်ခဲ့သည့် "Denenchofu Seseragikan" ဖြစ်သည်။
ဖန်လုံးနှင့်လုံးဝဖုံးအုပ်ထားပြီးပွင့်လင်းမှုခံစားချက်ရှိသော Denenchofu Seseragikan ၏မြင်ကွင်းကျယ်မြင်ကွင်းတစ်ခုⓒKAZNIKI
မစ္စတာကူမာသည် Denenchofu ရှိသူငယ်တန်း / မူလတန်းကျောင်းသို့တက်ရောက်ခဲ့သည်ကိုကျွန်ုပ်ကြားရသည်။ဒီနေရာကိုမှတ်မိပါသလား
"ကျွန်တော် Denenchofu ကိုသူငယ်တန်းနဲ့မူလတန်းကျောင်းမှာစုစုပေါင်းကိုးနှစ်သွားခဲ့တယ်။ အဲဒီအချိန်မှာငါကျောင်းအဆောက်အ ဦး ထဲမှာသာမကဘဲအမျိုးမျိုးသောမြို့များ၊ ပန်းခြံများ၊ မြစ်ကမ်းပါးများတလျှောက်လှည့်လည်ကြည့်ရှုခဲ့သည်။ တာမာမြစ်။ အများအပြားရှိခဲ့သည်။ ကျွန်ုပ်၏ကလေးဘဝအမှတ်တရများကိုဒီinရိယာတွင်စုစည်းထားသည်။ လက်ရှိ Seseragi ဥယျာဉ်တည်ရှိရာ Tamagawaen အပန်းဖြေဥယျာဉ်သာမကဘဲ Tamagawadai ပန်းခြံနှင့်ကက်သလစ် Denenchofu ဘုရားရှိခိုးကျောင်းများသာမကကျွန်ုပ်တည်ရှိဆဲရှိသည်။ ငါကဲ့သို့areaရိယာကိုလှည့်ပတ်သွားမယ့်အစား, Tama မြစ်နှင့်အတူကြီးပြင်းခဲ့သည်
"ဒီစီမံကိန်းကိုယ်နှိုက်ကအရမ်းကိုစိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတယ်လို့ကျွန်တော်ထင်တယ်။ ပန်းခြံနဲ့ဗိသုကာတစ်ခုလုံးလို့ထင်တယ်။ ဒါဟာစာကြည့်တိုက်၊ အစည်းအဝေးအဆောက်အအုံပဲ၊ ဗိသုကာသက်သက်မဟုတ်ဘူး။ ဒီပန်းခြံဟာစာကြည့်တိုက် / အစည်းအဝေးတစ်ခုရဲ့လုပ်ငန်းဆောင်တာတွေရှိတယ်" အများပြည်သူဆိုင်ရာဗိသုကာလက်ရာများတွင်ဗိသုကာကိုယ်နှိုက်ကလုပ်ဆောင်မှုရှိသည်။ သို့သော်မစ္စတာအိုတာရပ်ကွက်၏ပန်းခြံသည်ပန်းခြံ၏လုပ်ဆောင်ချက်ဖြစ်သည်ဟူသောအရာဖြစ်သည်။ အနာဂတ်၌အများပြည်သူဆိုင်ရာဗိသုကာပုံစံတစ်ခုဖြစ်ရန်နှင့်မြို့တော်၏ပုံစံကိုပြောင်းလဲရန်ဖြစ်သည်။ ဟုတ်တာပေါ့။ မစ္စတာအိုတာကူမှာအလွန်အဆင့်မြင့်တဲ့အကြံဥာဏ်ရှိတယ်။
အဆောက်အအုံသစ် Seseragikan ၏ဖန်တီးမှုသည်နေရာနှင့်ofရိယာ၏အဓိပ္ပာယ်နှင့်လုပ်ဆောင်မှုကိုပြောင်းလဲလိမ့်မည်။
"Seseragikan ဟာဒီရှေ့မှာရှိတဲ့ brush (cliff line)" လို့ခေါ်တဲ့မြစ်တစ်လျှောက်မှာရှိတဲ့ချောက်ကမ်းပါးတွေနဲ့ပေါင်းစပ်ထားတယ်။ ဒီတံတားအောက်မှာလမ်းကြောင်းတစ်ခုရှိတယ်။ သင်လမ်းလျှောက်နိုင်မယ့်နေရာတစ်ခုရှိတယ်။ ဒီတစ်ကြိမ်မှာတော့ Seseragikan က ပန်းခြံအတွင်းရှိလူများစီးဆင်းလာခြင်းနှင့်ဤthisရိယာသည်ဤရလဒ်ကြောင့်ပြောင်းလဲသွားလိမ့်မည်၊ သူ့ဟာသူလမ်းလျှောက်ခြင်းလုပ်ရပ်သည်ယခင်ကထက်ပိုမိုအဓိပ္ပါယ်ရှိသောအဓိပ္ပာယ်ရှိလိမ့်မည်ဟုကျွန်ုပ်ထင်သည်။ "
"ဒါဟာသေချာပေါက်တိုးလာလိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်။ လမ်းလျှောက်ခြင်းနဲ့စက်ရုံကိုပျော်ရွှင်စွာလုပ်ခြင်းဟာတစ် ဦး အနေနဲ့သက်ဝင်လှုပ်ရှားလိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်။ ဒီနည်းအားဖြင့်သမားရိုးကျအများပိုင်အဆောက်အအုံနဲ့areaရိယာဖြစ်သင့်ပုံကအနည်းငယ်ကွဲပြားပါတယ်။ ကျွန်မခံစားရပါတယ်" အများပြည်သူဆိုင်ရာအဆောက်အအုံများကိုယ်တိုင်peopleရိယာအတွင်းရှိလူများ၏စီးဆင်းမှုကိုပြောင်းလဲစေသောပုံစံသစ်တစ်ခုသည်ဤနေရာတွင်မွေးဖွားလာဖွယ်ရှိသည်။
Denenchofu Seseragikan (ပြည်ထဲရေး) ⓒKAZNIKI
ပထမ ဦး စွာ "သစ်တော၏ ၀ ါဒ" အကြောင်းကျွန်တော်တို့ကိုပြောပြပါ။
"မုတ်သည်သစ်တောနှင့်ဗိသုကာအကြားတစ်ဝက်မျှသာဖြစ်သည်။ အလယ်အလတ်areaရိယာသည်အချမ်းသာဆုံးနှင့်ပျော်စရာအကောင်းဆုံးဖြစ်သည်ကိုဂျပန်ကတစ်ချိန်ကသိခဲ့ရသည်။ ၂၀ ရာစုတွင်မုတ်ဆိတ်တည်နေရာသည်တဖြည်းဖြည်းပျောက်ကွယ်သွားခဲ့သည်။ အိမ်သည်တံခါးပိတ်နေရာဖြစ်သည်။ အိမ်နှင့်ဥယျာဉ်အကြားဆက်ဆံရေးပျောက်ကွယ်သွားသည်။ ၎င်းသည်ကျွန်ုပ်ကိုအလွန်အထီးကျန်စေသည်နှင့်၎င်းသည်ဂျပန်ယဉ်ကျေးမှုအတွက်ကြီးမားသောဆုံးရှုံးမှုဖြစ်သည်ဟုထင်မြင်သည်။
ကံကောင်းထောက်မစွာ၊ ကျွန်ုပ်သည်မုတ်နှင့်အတူအိမ်၌ကြီးပြင်းလာခဲ့ရာတံခါးမုတ်ပေါ်မှစာအုပ်တစ်အုပ်ကိုဖတ်ခြင်း၊ မုတ်တွင်ကစားခြင်း၊ မုတ်ပေါ်၌တည်ဆောက်ခြင်းစသည်တို့ဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်သည်ထပ်မံပြန်လည်ရရှိနိုင်ပါကကျွန်ုပ်ထင်သည်။ ဂျပန်မြို့ကြီးရဲ့ပုံရိပ်ကအများကြီးပြောင်းလဲသွားပါလိမ့်မယ်။ ဒီတစ်ခါမှာတော့ဗိသုကာသမိုင်းကြောင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးကိုယ့်အသိကိုတင်ပြဖို့ကြိုးစားခဲ့တယ်။ "
"ဒီလိုမျိုးတစ်ခုခုထွက်ပေါ်လာမယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်။ အဲဒါကိုအသုံးပြုတဲ့သူတွေဒီဇိုင်နာတွေနဲ့အစိုးရကထင်တာထက်ပိုပြီးအစီအစဉ်တွေပိုများလာမယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်။ "
Kengo Kuma သည်ပထမထပ်တွင်ရှိသော Seseragi Bunko ရှိ rest KAZNIKI
ကျေးဇူးပြု၍ "သစ်တောသို့ရောနှောနေသည့်အမိုးများအစုတစ်ခု" အကြောင်းပြောပါ။
"ဒီအဆောက်အအုံဟာသေးငယ်တဲ့အဆောက်အအုံမဟုတ်ပါ။ ၎င်းမှာပမာဏတော်တော်များများရှိပါတယ်။ အကယ်၍ သင်ကဖော်ပြသည်ဆိုလျှင်၎င်းသည်ကြီးမားလွန်းပြီးသစ်တောနှင့်ချိန်ခွင်လျှာမှာဆိုးဝါးလိမ့်မည်။ ထို့ကြောင့်ခေါင်မိုးကိုအများအပြားအဖြစ်ခွဲထားသည်။ အပိုင်းအစတွေနဲ့အစင်းတွေတန်းစီထားတယ်။ ငါဒီလိုပုံစံမျိုးကိုစဉ်းစားမိတယ်။
ညည်းညူခန်းမထဲမှာ庇(နား)သစ်ခုတ်များသည်သစ်တောများကို ဦး ညွှတ်ကြသည်။ဗိသုကာပညာသည်သဘာဝကိုကိုးကွယ်သည်။ "
"အတွင်းပိုင်းနေရာမှာမျက်နှာကြက်ကမြင့်နေတယ်၊ ​​အနိမ့်ကျတယ်၊ ဒါမှမဟုတ်ဝင်ပေါက်မှာအတွင်းပိုင်းနေရာဟာအပြင်ဘက်ကိုယိုယွင်းနေသလိုပဲ။ ဒီလိုနေရာမျိုးစုံကိုဖန်တီးထားတယ်။ ဒါကတစ်ခုတည်းသောရှည်လျားသောနေရာတစ်ခုဖြစ်သည်။ အတွင်းပိုင်း၊ ခင်ဗျားဟာနေရာအမျိုးမျိုးမှာအမှန်တကယ်တွေ့ကြုံခံစားနိုင်မှာပါ။ သမားရိုးကျရိုးရှင်းတဲ့ box-shaped ဗိသုကာနဲ့တော်တော်လေးကွဲပြားပါတယ်။
ကျေးဇူးပြုပြီး "နွေးထွေးမှုအပြည့်ရှိတဲ့မြို့ထဲက living ည့်ခန်း" အကြောင်းပြောပါ။သငျသညျသစ်သားနှင့်ပတ်သက်။ အထူးသဖြင့်ပြောကြသည်။
“ ဒီတစ်ကြိမ်မှာတော့သစ်သားကြားမှာစပျစ်သီးကိုသုံးနေတယ်။ အသုံးပြုသူအားလုံးကိုသူတို့ရဲ့ living ည့်ခန်းလိုသုံးချင်တယ်။ ဒီလောက်ကြွယ်ဝတဲ့စိမ်းလန်းစိုပြေတဲ့ (living living with with with spl there) spl living living spl spl living spl living living living living living living , ငါ the ည့်ခန်း၏သက်တောင့်သက်သာခံစားမှုကိုခံစားချင်သည်။ ၎င်းသည်သေတ္တာပုံစံအများပြည်သူအဆောက်အအုံတွင်မဟုတ်ဘဲအိမ်ခေါင်မိုး၏လျှောစောက်ကိုခံစားနိုင်သော living ည့်ခန်းနှင့်တူသည်။ ကျွန်ုပ်စာအုပ်တစ်အုပ်ဖတ်နိုင်မည်ဟုမျှော်လင့်ပါသည်။ ဖြည်းဖြည်းကောင်းတဲ့နေရာလေးမှာသူငယ်ချင်းတွေနဲ့စကားပြောပါ၊ ကျွန်တော်အနည်းငယ်ပင်ပန်းတဲ့အခါဒီကိုလာပြီး room ည့်ခန်းမှာရှိတဲ့ဆိုဖာပေါ်မှာထိုင်နေသလိုခံစားရတယ်။
ထိုရည်ရွယ်ချက်အတွက်တည်ငြိမ်အေးဆေးသောပစ္စည်းဟောင်းသည်ကောင်းသည်။လွန်ခဲ့သောဆယ်စုနှစ်များကကျွန်ုပ်သည်ကလေးဘဝတုန်းက Denenchofu တွင်အိမ်တစ်လုံးဆောက်ခဲ့သည်။သူငယ်ချင်းတွေရဲ့အိမ်တွေကိုကျွန်တော်သွားလည်ပတ်ခဲ့တယ်၊ ဒါပေမယ့်လူသစ်တွေထက်အရင်အိမ်ဟောင်းတွေနဲ့အချိန်ကုန်လွန်သွားတဲ့အိမ်တွေကအရမ်းဆွဲဆောင်မှုရှိတယ်။ "
သင် Denenchofu ကိုရွာတစ်ရွာအဖြစ်ခံစားရမယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်။
“ တကယ်တော့ငါစပြီးတွေးမိတာကမြို့ကြီးများနဲ့ကျေးလက်ဒေသတွေဟာမတူကြဘူး။ အရင်ကကြီးမားတဲ့မြို့ကြီးများဟာကျေးလက်ဒေသနဲ့ဆန့်ကျင်ဘက်ဖြစ်တယ်လို့ထင်ခဲ့ကြတာပါ။ Denenchofu ဟာဂျပန်မှာကျော်ကြားတဲ့လူနေအိမ်လေးတစ်ခုဖြစ်ပေမဲ့၊ အဓိပ္ပာယ်ရှိတယ်လို့ကျွန်တော်ထင်တယ်။ ကျေးလက်ဒေသကြီးလို့ထင်တယ်။ တိုကျို၏ပျော်စရာမှာ၎င်းသည်စရိုက်အမျိုးမျိုးရှိသောကျေးရွာများနှင့်တူသည်။ အဲဒို၏မူလဇာစ်မြစ်သည်အလွန်ရှုပ်ထွေးသောမြေအနေအထားဖြစ်သည်။ ရှုပ်ထွေးသောမြေအနေအထားရှိပြီးသင်တွေ့ရခဲသည်။ ကမ္ဘာ့အကြီးဆုံးမြို့ကြီးများနှင့်ထိုခြံ၏ချိုင့်ဝှမ်းများနှင့်လုံးဝကွဲပြားခြားနားသောယဉ်ကျေးမှုရှိသည်။ အကယ်၍ သင်လမ်းတစ်ခုသို့မဟုတ်ခေါင်မိုးတစ်ခုကိုရွေ့လျားလျှင်သင်နှင့်အတူအခြားယဉ်ကျေးမှုတစ်ခုရှိသည်။ ထိုသို့မတူကွဲပြားမှုများသည်တိုကျို၏ဆွဲဆောင်မှုဖြစ်သည်။ ဒီကျေးလက်ဒေသမှာမြို့တစ်မြို့ဒါမှမဟုတ်ကျေးလက်စတဲ့လေထုအမျိုးမျိုးရှိပါတယ်။ Seseragikan မှာကျေးလက်ဒေသကိုကျေးရွာတစ်ရွာအဖြစ်သင်ပျော်မွေ့နိုင်ပါတယ်။
1954 ခုနှစ်တွင်မွေးဖွားခဲ့ပြီးတိုကျိုတက္ကသိုလ်၊ ဗိသုကာဌာနပြီးစီးခဲ့သည်။ ၁၉၉၀ Kengo Kuma & Associates Architects နှင့် Urban Design Office ကိုတည်ထောင်ခဲ့သည်။တိုကျိုတက္ကသိုလ်မှပါမောက္ခအဖြစ်လုပ်ကိုင်ပြီးနောက်သူသည်တိုကျိုတက္ကသိုလ်မှအထူးပါမောက္ခနှင့်ဂုဏ်ထူးဆောင်ပါမောက္ခဖြစ်သည်။
၁၉၆၄ ခုနှစ်၊ တိုကျိုအိုလံပစ်မှာတွေ့ခဲ့တဲ့ Kenzo Tange ရဲ့ Yoyogi မိုးလုံလေလုံအားကစားကွင်းကကျွန်မကိုထိတ်လန့်တုန်လှုပ်စေခဲ့ပြီးငယ်ငယ်ကတည်းကဗိသုကာပညာရှင်ဖြစ်လာဖို့ရည်ရွယ်ထားပါတယ်။တက္ကသိုလ်၌သူသည်ဟီရိုရှီဟာရာနှင့်ယိုရှီချီကာအူချီဒါလက်အောက်တွင်ပညာသင်ကြားခဲ့သည်။ ဘွဲ့ရခဲ့စဉ်ကအာဖရိကရှိဆာဟာရသဲကန္တာရကိုဖြတ်ကျော်ပြီးကျေးရွာများကိုလေ့လာခဲ့သည်။ကိုလံဘီယာတက္ကသိုလ်မှလာရောက်လည်ပတ်သည့်သုတေသီတစ် ဦး အနေဖြင့် ၁၉၉၀ တွင် Kengo Kuma & Associates ကိုတည်ထောင်ခဲ့သည်။သူသည်နိုင်ငံပေါင်း ၂၀ ကျော်တွင်ဗိသုကာဒီဇိုင်းရေးဆွဲခဲ့သည် (ဂျပန်ဗိသုကာဆိုင်ရာအင်စတီကျုဆု၊ ဖင်လန်နိုင်ငံမှနိုင်ငံတကာသစ်ဗိသုကာဆု၊ အီတလီမှနိုင်ငံတကာကျောက်တုံးဗိသုကာဆု) စသည်တို့ကိုပြည်တွင်းနှင့်ပြည်ပတွင်ဆုအမျိုးမျိုးရရှိခဲ့သည်။ဒေသခံပတ်ဝန်းကျင်နှင့်ယဉ်ကျေးမှုများနှင့်ရောနှောနေသည့်ဗိသုကာပညာကို ရည်ရွယ်၍ ကျွန်ုပ်တို့သည်လူသားပုံစံ၊ နူးညံ့သိမ်မွေ့သောဒီဇိုင်းကိုအဆိုပြုထားသည်။ထို့အပြင်ကွန်ကရစ်နှင့်သံကိုအစားထိုးရန်ပစ္စည်းအသစ်များကိုရှာဖွေခြင်းအားဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်စက်မှုထွန်းကားသောလူ့အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုပြီးနောက်စံပြဗိသုကာပုံစံကိုရှာဖွေနေသည်။
4ပြီ ၁၇ ရက် (နေ) မှ ၂၅ ရက် (နေ)
ရုံးဖွင့်ရက်ကြိုတင်မှာကြားမှုပြုလုပ်ပါကရက်ပေါင်း ၁၃း၀၀ မှ ၁၈း၀၀ အတွင်းဖွင့်ပါ။
စနေနေ့နှင့်တနင်္ဂနွေ ၁၁: 11-00: 18
ပုံမှန်အားလပ်ရက် - ဗုဒ္ဓဟူးနေ့
နှစ်စဉ်မေလနှင့်နိုဝင်ဘာလ ၃ ရက်စနေနေ့
အက္ခရာ / ငွေ၊ ဖဲကြိုး
6ပြီ ၁၇ ရက် (နေ) မှ ၂၅ ရက် (နေ)